Sudaan Kibaaf Yeroon Karaa Funduraa Jijjiiruu Amma
Wagga 10 dura sabnii Sudaan kibbaa biyya Sudaan irra addaan bahuudhaaf sagaleedhaan morteesse. Gammachuudhaa fi abdii guddaadhaan adduunyaa irrati biyyii haaraan Adoolessa 9/2011 dhalatte.
Haata’u malee gammachuun sun hundi ittuu fagoo hindeemin garaa abdii dhabiinsaatti jijjiramaa deeme. Sababin isaas ji’a Muddee bara 2013 wal’aansoon aangoo prezidaant Salvaa Kiir fi itti anaa prezidaantii Reek Maachaar gidduutii ka’e gara wal waraansaatti balate.
Wal waraansichii bara 2018 waliigaltee nagaa mallatteefameen dhaabate. Akka gabaasin Komishiinii mirga namoomaa mootumootaa gamtoomanii Ji’a guraandhalaa baasee ibsutti ammayuu hookkorii itti fufee jira.
Akka ibsii biyyoottan sadan Yunaayitid Isteets, yunaayitid kiingdam fi Noorway baasan jedhutti, jeequmsa waltti bu’iinsaan wal qabateen, beelaan, lolaadhaan, dhukubaan kan ka’e seenaan wagga kurnan jalqabaa biyyaa haaraa kanaa rakkinaan kan guutameedha.
Biyyoottan sadan haala gargaarsa namoomaa mijeesuudhaaf akkasumas nageenya ojjattootaa gargaarsaa mirkaneesudhaaf tarkaanfiin atattamaan hokkaraa dhaabuu akka fudhatamuu qabu gaafatan. Akka ibsaa biyyootan sadaniiti Bu’iin gaariin waliigaltee nageenyaa bara 2018 lammilee biyyatti irratti amma tokkoof mulatee ture.
Ibsaa addaatiin hoggantuun USAID Samaantaa Paawor akka jedhanitti, hoggaantoonii Sudaan kibbaa fedhii gargaarsaa adduunyaa,galii zayita boba’aa biyyaatii, carraa lakkoofsa hin qabne kan saba isaanii miiliyoonaa 12 ol kaasuu dandau balleesan. Har ‘a yeroo kaminuu caalaa lammiileen Sudaan Kibba harka sadii keessaa harkii lama beelaaf saaxilamanii jiru.
Lammiilee biiyatii keessaa harkii 3 ykn miliyoonii 3.8 akka qee’e isaanii irraa buqa’aniti jiru. Kana keessa Namoonii miliyoonii 2.2 biyyottan ollaatti kan baqatanii jiraatanuudha. Miiliyooniin 1.6 achuma biyyaa keessatii warren buqqa’aniidha.
Hookoraa dhaabisuudhaan alatti Hoggantoon Sudaan kibbaa akka lammilee biyya isaanii dursan fi akka tajaajilan gaafatan biyyootan sadaniif Samantaa Paawor ibsaa of danda’een.
Flannoo naga qabeessa, amanamaa fi hunda hirmaachisaa ta’eef gadi fageenyaan qophaa’amuu qaba. Umnii waloo qophaa’uu qaba. Haalii haqaa yeroo ce’uumsaa guutummaatti hundaa’utu irra jira. Akkasumas amma danda’ametii fooyya’insii fayinaansii mulachuu qaba.
Amma Sudaan kibbaa jireenyaa wagga kurnaffaa lammataa keessaa seenaa jirtti. Biyyootan sadan guddina amma ammaati argame simataniiruu. Warren walii galtee taasisan itti gaafatamummaa waadaa isaanii fudhachuudhaaf daddafanii fuulaa duratii deemuu qabu. Jedhaniiru.
Samantaa Paawor karaa isaaniitiin akka jedhanitti,Hoggantootaa Sudaan kibbaa wareen waligaaltee nageenyaa mallateessaniif waadaa walii galtee isaanii keessatii seenan hojii irra oolchuun, biyyaa waggootan dheeraadhaaf abjuu isaanii turette, biiyaa qabsoo bilisumaatiin argatan guddisuudhaaf hojii jabaa jalqabuun heroon isaa Amma.